Mmiri mmiri hydrogen: ihe ọ bụ, otú e si emepụta ya na ihe bụ ojiji ya | Green Renewables
Mmiri mmiri hydrogen
Portillo nke German | 02/11/2021 10:58 | Ike imeghari ohuru
Ihe kacha dị mfe na mbara igwe bụ hydrogen. Enwere ike ịchọta ya n'ụdị gas na kpakpando na mbara ala ma bụrụkwa akụkụ nke ihe dị iche iche nke kemịkal na organic dị ka mmiri. Nke mmiri mmiri hydrogen ọ nwere ike ịnwe ụfọdụ ngwa na-adọrọ mmasị na ngalaba mmepụta ihe dị iche iche.
Ya mere, anyị ga-enyefe akụkọ a iji gwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara hydrogen mmiri mmiri, njirimara ya na otu esi enweta ya.
1 Uru nke hydrogen
3 Otu esi echekwa mmiri mmiri mmiri
4 Eji na ngwa nke hydrogen mmiri mmiri
Uru nke hydrogen
Hydrogen na-anọchi anya ihe karịrị 70% nke ihe a na-ahụ anya na mbara igwe, nke na-eme ka ọ bụrụ ihe kachasị ukwuu. Enwere ike ịchọta ya n'etiti etiti kpakpando ndị na-eto eto, na mbara ikuku nke nnukwu mbara ala gaseous (dị ka Jupiter na Venus), dị ka ihe ndị dị n'elu ụwa, na dịka akụkụ nke ọtụtụ puku organic na inorganic ogige na okike. N'ihi ya, ọtụtụ usoro ndu na-achịkwa ya.
E nwere ọtụtụ isotopes nke hydrogen (atom nke otu kemịkal, ma nwere ọnụọgụ neutron dị iche iche):
Protium (1H). Ihe mejupụtara ya bụ proton, ọ nweghị neutron dị na etiti ahụ. Ọ bụ ụdị hydrogen a na-ahụkarị.
Deuterium (2H). Ọ dị arọ karịa hydrogen nkịtị, oghere ya nwekwara otu neutron na otu proton.
Tritium (3H). O nwere neutrons abụọ n'ime oghere n'akụkụ proton, nke na-eme ka ọ dị arọ.
Anyị nwere ike ịkọwa ya dị ka isi njirimara nke hydrogen mmiri:
Ebe isi nri dị ala, nke nwere ike ibute frostbite ma ọ bụ hypothermia. O nwedịrị ike ịkpata nsogbu iku ume na iku ume ma ọ bụrụ na ikuru ume.
N'ihi okpomọkụ nke hydrogen mmiri mmiri, ọ nwere ike ịmepụta ice mgbe ọ na-abanye na mmiri na ikuku, nke nwere ike igbochi valves na oghere nke tankị nchekwa gị.
Ọ na-ekupụ ọkụ mgbe niile ma na-emepụta hydrogen, nke ga-asachapụ na mgbochi n'enweghị nsogbu ka ọ ghara ịgwakọta ya na ikuku condensed na ikuku, na-agbanye ọkụ na ịgbawa.
Nnukwu njupụta nke uzuoku juru eju nwere ike ime ka ígwé ojii ahụ kpụrụ akpụ na-aga n'ihu ma ọ bụ gbadata ma ọ bụrụ na mmiri mmiri hydrogen agbapụ.
Ọ dị mma ịmara na e nwere ọtụtụ usoro mmepụta hydrogen na-eji ihe dị iche iche na ike. Dabere na ihe ndị a, anyị nwere ike ikwu na n'ókè ụfọdụ A na-emepụta usoro mmeghari ohuru 100%, 100% fosil ma ọ bụ agwakọta. Na mgbakwunye, enwere ike ịme ha na ụlọ ọrụ etiti na obere akụkụ dị nso na ebe eji. Ya mere, enwere ike nweta ume ọbụna na mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ.
Otu esi echekwa mmiri mmiri mmiri
Ime hydrogen mmiri mmiri na-aba uru n'ụzọ akụ na ụba na iji nweta ya n'ọtụtụ ebe na-aga site na nchekwa zuru oke nke hydrogen dị ka mkpa dị ugbu a maka njem na nkesa ya na-esote site na mmepụta ruo n'ókè nke oriri.
Ekwesiri iburu n'uche na usoro na ọnọdụ nke a ga-echekwa hydrogen ga-adabere na njedebe njedebe. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịmata ọdịiche:
Sistemụ nchekwa hydrogen na-akwụsị, adabara maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụlọ ma ọ bụ nkesa ike mmepụta ike. N'okwu a, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe mgbochi ọ bụla n'ihe gbasara mpaghara ejiri, ibu, olu ma ọ bụ iji usoro inyeaka.
N'aka nke ọzọ, usoro nchekwa hydrogen maka ụgbọ ala ha na-enye opekempe iji hụ na ụgbọ ala nwere oke dị ka ụgbọ ala ọdịnala. Tụkwasị na nke ahụ, a chọrọ ọrụ enyemaka hydrogen na-arụ ọrụ na nke siri ike, nke enwere ike ịhazi ya na mkpụrụ ndụ mmanụ n'ime ụdị ụgbọ ala niile.
Okwesiri iburu n'uche na ngalaba njem bu otu n'ime ihe kachasi mkpa na oriri ume n'uwa, karia na mba ndi mepere emepe. Nke a emeela ka ụlọ ọrụ ụgbọ ala bụrụ otu n'ime ndị isi na-anya maka ọganihu niile na mkpụrụ ndụ mmanụ ụgbọala, hydrogen na teknụzụ nchekwa ha metụtara.
N'otu aka ahụ, mgbe ị na-ekwu maka ụdị nchekwa dị iche iche nke gas a, ọ dị mkpa ịkọwapụta mkpa ọ dị ịbawanye nchekwa ya, ebe ọ bụ na ọ bụ. nke ukwuu ire ọkụ, nke na-adịghị egbu egbu, enweghị agba, enweghị ụtọ na enweghị ụtọ. N'echiche a, ndepụta nke usoro nchekwa na-agụnye ohere na nyocha nyocha, dị ka carbon (na-arụ ọrụ, graphite, molecular carbon beds, nanofibers, fullerenes ...), ogige (NH3), microspheres iko na zeolites.
N'aka nke ọzọ, nchekwa nchekwa dị ala na mmiri mmiri na nchekwa dị ala na gas ma ọ bụ ígwè hydride na-arụ ọrụ egosiwo na a pụrụ ịdabere na ya ma nwee ike iji ya mee ihe n'enweghị nsogbu.
Eji na ngwa nke hydrogen mmiri mmiri
N'ihi nkà na ụzụ na ọmụmụ ihe dị iche iche dị na hydrogen mmiri mmiri, enwere ike itinye ya na mpaghara mmepụta ihe dị iche iche. A ghaghị iburu n'uche mgbe niile na a na-eji ya eme ihe dị ka isi iyi ike dị ọcha ma dị irè nke na-adịghị emetọ gburugburu ebe obibi. Otu n'ime ngwa ndị kacha adọrọ mmasị bụ maka ụlọ ọrụ ike, ụgbọ njem, ụlọ ọrụ nri, ụlọ ọrụ ikuku na ụlọ nrụpụta. Anyị ga-abanyekwu nkọwa gbasara ojiji na ngwa nke hydrogen mmiri mmiri.
Ọdịmma ya dị elu na-eme ka ọ bụrụ ezigbo gas jụrụ oyi, karịsịa n'ihi ọrụ nnyefe ọkụ ya dị mma. Iji hydrogen dị ka mmanụ ọzọ na-ekwe nkwa nnwere onwe nke ụgbọ ala, na-ebelata ikuku mmetọ, si otú a na-enye aka na nchekwa nke gburugburu ebe obibi.
Ojiji nke gas a bu n'obi imeziwanye mma na nchekwa nri site na mmepe nke teknụzụ ọhụrụ. Ọ bụ mmanụ ọkụ na-arụ ọrụ nke ọma maka ịkwanye rọketi ma bụrụkwa isi iyi ike maka ịkwado ndụ na usoro kọmputa na gburugburu mbara igwe. Ọ bụ isi ụlọ ọrụ maka ịtụgharị nnukwu crude ka ọ bụrụ mmanụ a nụchara anụcha.
Ojiji hydrogen dị ka mmanụ ọkụ nwere ọtụtụ mmetụta dị mma na gburugburu ebe obibi. Anyị na-akọwapụta ihe kachasị mkpa:
Ọ bụ ume dị ọcha, na-ahapụ naanị uzuoku mmiri dị ka ihe fọdụrụ. Ya mere, ọ dị mma na gburugburu ebe obibi karịa mmanụ ọkụ.
Ọ naghị agwụ agwụ.
Enwere ike itinye ya n'ọrụ dị iche iche, site na ụlọ ọrụ gaa na njem ma ọ bụ ezinụlọ.
Kwe ka nchekwa na ibufe buru ibu.
Ọ dị irè karịa ọkụ eletrik. Dịka ọmụmaatụ, a na-ana ụgbọ ala mmanụ ụgbọala hydrogen n'ụzọ zuru ezu n'ime nkeji ise ma nwee otu ebe dị ka ụgbọ ala combustion.
Uru ndị a niile na-eme ka hydrogen bụrụ isi iyi ike nke ọma, dị ọcha na nchekwa, nke a ga-atụle n'ọtụtụ ebe mmepụta ihe.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu banyere hydrogen mmiri mmiri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Mmiri mmiri hydrogen
Ụgbọ ala anyanwụ
Otu esi eme iko